लज्जास्पद हारपछि झस्किएका लिभरपुल प्रशिक्षक उर्गेन क्लप !
मंगलबार, २० असोज, २०७७
एजेन्सी । लिभरपुलका प्रशिक्षक उर्गेन क्लप एस्टनभिल्लासँगको अप्रत्यासित हारपछि निराश रहेका छन् । उनले यस सिजन सानदार सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, चौथो खेलमा जुन निराशा जनक हार भोगे त्यसपछि उनी झस्किएको समिक्षकहरु बताउँछन् । समिक्षकहरुका अनुसार यस सिजन लिभरपुलले सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै देखिएको बताएका छन् ।
समिक्षकहरुका अनुसार लिभरपुलले यसअघि जुन रुपले खेल प्रदर्शन गर्दै आइरहेको थियो त्यो अनुरुप यस सिजन नदेखिएको र सुधार आवश्यक रहेको छ ।
लिभरपुलले प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमा नै तीन गोल खाएको थियो ।
एस्टन भिल्लाविरुद्ध सात गोल खाएपछि भने उच्च फर्ममा रहेको लिभरपुलको टिमभित्रको कमजोरीपन छताछुल्ल भएको समिक्षकहरु बताउँछन् । यसले पनि उनलाई बेलैमा डिफेन्स लाइन सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । उनले लामो समय लगाएर बनाएको साख जोगाउन पनि उत्तिकै दबाब परेको छ । उक्त हारले उनलाई झस्काएको तर, सुधारका लागि कदम चाल्न भने बाटो देखाएको समिक्षकहरु बताउँछन् ।
आलु पाठशाला सञ्चालन गर्दै झिमरुक गाउँपालिका
प्युठान । झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि शाखाले हाल आलु पाठशाला सञ्चालन गरेको छ । आलु लगाउनेदेखि आलु लगाउने विधि सिकाउनका लागि पाठशाला सञ्चालन गरिएको हो । पाठशालामा २५ सक्रिय कृषक सदस्य सहभागी छन् ।
सुरु भयो कक्षा १२ को परीक्षा, कति परीक्षार्थी छन् सहभागी ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले परीक्षामा ढुक्क भएर सहभागी हुन सम्बन्धित विद्यार्थीहरुसँग आग्रह गरेका छन् । उनले परीक्षा केन्द्रमा सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुने भएकाले ढुक्क
कास्की । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति तथा जिल्ला प्रशासनले सोमबार यहाँका केही क्रसर उद्योगमा संयुक्तरूपमा गरेको अनुगमनमा